Ubumfihlo be-ComWales namakhukhi
IComWales Limited kanye nanoma yiziphi izinkampani zamaqembu (“thina” “thina” “zethu”) izibophezele ekuvikeleni nasekuhlonipheni ubumfihlo bakho. Ngenhloso yomthetho wokuvikelwa kwedatha, siyisilawuli sedatha futhi sizocubungula imininingwane yakho ngokuya nge-General Data Protection Regulation (i-EU) ka-2016/679 nemithetho kazwelonke ehlobene nokuqhutshwa kwemininingwane yomuntu uqobo. Sicela ufunde okulandelayo ngokucophelela ukuze uqonde ukubuka kwethu nezenzo zethu maqondana nemininingwane yakho nokuthi sizoyiphatha kanjani.
2. IZIVIVINYO ZOKWAKHIWA KWETHU
2.1 Singase siqoqe futhi sicubungule imininingwane yakho ephathelene nawe kulezi zimo ezilandelayo:
2.1.1 lapho ugcwalisa amafomu kwiwebhusayithi yethu (“iSayithi”). Lokhu kufaka igama lakho, ikheli, i-imeyili nenombolo yocingo, enikezwa ngesikhathi sokubhalisa ukusebenzisa isiza sethu, lapho usicela khona ukuthi sikuthinte ngezimpahla noma ngezinsizakalo zethu, ubhalisele uhlu lwethu lokuposa, noma ubhalise / ucele izimpahla zethu kanye nezinsizakalo;
2.1.2 noma nini lapho usinikeza imininingwane lapho ubika inkinga ngeSayithi yethu, wenza isikhalazo, ucwaninga noma usithinta nganoma yisiphi esinye isizathu. Uma usithinta, singagcina irekhodi lalowo mbhalo;
2.1.3 imininingwane yokuvakasha kwakho esizeni sethu kubandakanya 2.2.2 kuma-Cookies ngezansi); futhi
2.1.4 noma nini lapho usivezela imininingwane yakho, noma siqoqa imininingwane kuwe nganoma iyiphi enye indlela, ngeSayithi lethu.
2.2 Singase futhi siqoqe imininingwane ngezindlela ezilandelayo:
2.2.1 Singaqoqa imininingwane ngedivayisi yakho, okubandakanya lapho kutholakala khona ikheli lakho le-Protocol ye-Intanethi, ngezizathu zokuvikela inkohliso. Singahle futhi siqoqe imininingwane mayelana nohlelo lokusebenza ledivayisi yakho nohlobo lwesiphequluli, ukuphathwa kohlelo nokubika imininingwane ehlanganisiwe kubakhangisi bethu. Le yimininingwane yezibalo mayelana nezenzo zokuphequlula zabasebenzisi bethu namaphethini, futhi ayikhombe muntu.
2.2.2 Indawo yethu isebenzisa amakhukhi nobuchwepheshe obufanayo ukukuhlukanisa nabanye abasebenzisi beSayithi yethu. Lokhu kusisiza ukukunikeza okuhlangenwe nakho okuhle lapho ubhekabheka indawo yethu futhi kusivumela ukuthi sithuthukise iSayithi lethu. Ngemininingwane enemininingwane yamakhukhi esiwasebenzisayo nezinhloso esizisebenzisela wona bheka inqubomgomo yethu yamakhukhi.
2.3 Singasebenzisa idatha yakho yomuntu siqu ngezinhloso zethu ezisemthethweni ukuze:
2.3.1 ukukunikeza imininingwane, noma izinsizakalo ozicelile kithi;
I-2.3.2 ikuvumela ukuthi ubambe iqhaza ezicini ezisebenzayo zeSayithi yethu, lapho ukhetha ukwenza kanjalo;
2.3.3 uqinisekise ukuthi okuqukethwe okuvela kusayithi lethu kwethulwa ngendlela ephumelela kakhulu kuwe nakwidivayisi yakho;
2.3.4 thuthukisa indawo yethu kanye nezinsizakalo;
2.3.5 inqubo bese ubhekana nanoma yiziphi izikhalazo noma imibuzo eyenziwe nguwe; futhi
2.3.6 ukuxhumana nawe ngezinhloso zokuthengisa lapho ubhalisele khona lokhu (bona isigaba 6 ukuthola eminye imininingwane).
Isayithi lethu kungenzeka, ngezikhathi nezikhathi, liqukethe izixhumanisi eziya nokusukela kumawebhusayithi abantu besithathu. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi uma ulandela ukuxhumana noma iyiphi yalezi zingosi, lawo mawebhusayithi azosebenzisa imigomo ehlukene ekuqoqweni nasekusizeni kwemininingwane yakho yangasese futhi asemukeli umthwalo wemfanelo noma isibopho kulezi zinqubomgomo. Lapho ushiya isayithi lethu, sikukhuthaza ukuba ufunde inothisi / inqubomgomo yobumfihlo yayo yonke iwebhusayithi oyivakashelayo.
3.1 Sizoqoqa imininingwane efana negama lakho, ikheli, inombolo yocingo nekheli le-imeyili uma u-oda izimpahla noma izinsizakalo ezivela kithi ngeSayithi lethu noma amasayithi axhumene nomphakathi / ezinye izingosi zabalingani besithathu. Sizosebenzisa lolu lwazi ukucubungula i-oda lakho futhi sihambisane nezibopho zethu zenkontileka.
3.2 Ukuze senze inkontileka yethu nawe, singadinga futhi ukuthi sabelane ngemininingwane yomuntu nomuntu wesithathu njengabahlinzeki bokukhokha nezinhlangano zeposi ukusiza ukulethwa kwezimpahla noma izinsizakalo oyalile; lokhu kungafaka abalingani be-EDI, abahambisi beqembu lesithathu, noma abahlinzeki bewaranti.
3.3 Futhi singakhangisa ngempendulo yakho kuwebhusayithi yethu nezinto zokukhangisa (kuncike ekutholeni imvume yakho yangaphambili lapho kunesidingo khona);
3.4 Sizogcina imininingwane yakho inqobo nje uma sidinga lokhu ukukunikeza ngezimpahla noma izinsizakalo ezi-odwawe kithi futhi isikhathi esiyiminyaka eyi-6 ngemuva kwalokho. Lapho ubhalisele khona ukuthola imbalelwano yokuthengisa evela kithi sizogcina imininingwane yakho yesikhathi sesikhathi esichazwe esigabeni 6 ngezansi.
Sizoqoqa imininingwane efana namagama abasebenzi bakho, izinombolo zocingo kanye namakheli e-imeyili ukuze sikuthinte mayelana nezimpahla noma izinsiza ezithunyelwe kuwe, ukubeka amanye ama-oda futhi sikukhokhele izimpahla kanye / noma nezinsizakalo ezinikeziwe. Sizogcina imininingwane yomuntu yeminyaka engu-6 ngokuqhubeka nokunikezwa izimpahla / nezinsizakalo.
5. UMA WAFUNA UKUTHOLA IDATHA YABANTU
Lapho sidinga ukuqoqa imininingwane yomuntu uqobo ngomthetho, noma ngaphansi kwemibandela yesivumelwano esinayo nawe futhi wehluleka ukuhlinzeka ngemininingwane lapho iceliwe, ngeke sikwazi ukwenza isivumelwano esinaso noma esizama ukungena nawe (ngokwesibonelo ukukunikeza ngezimpahla noma ngezinsizakalo zethu). Kulokhu, kungadingeka ukuthi sikhansele umkhiqizo noma insizakalo onayo nathi kodwa sizokwazisa uma kunjalo ngaleso sikhathi.
6.1 Ngokungeziwe kokusetshenziswa okuchazwe ezigabeni 2-4 ngenhla, lapho ukhombisa ukuthi ungathanda ukuthola izincwadi zokumaketha ezivela kithi, bhalisela uhlu lwethu lwamakheli noma izincwadi zezindaba, ungene kunoma imiphi imincintiswano yethu noma usinike imininingwane yakho emicimbini yokuxhumana nabantu , singasebenzisa idatha yakho yomuntu siqu ngezintshisakalo zethu ezisemthethweni ukuze sikunikeze imininingwane mayelana nezimpahla zethu, izinsizakalo, izibuyekezo zebhizinisi nezehlakalo, esicabanga ukuthi zingaba nentshisekelo kuzo.
6.2 Unelungelo lokuphuma ekutholeni imininingwane echazwe esigabeni 6.1 nganoma yisiphi isikhathi. Ukukhetha ukuphuma ekutholeni lolo lwazi unga:
6.2.1 phawula ibhokisi elifanele elifanele elisesimweni lapho siqoqa imininingwane yakho;
6.2.2 ngokuchofoza inkinobho yokubhaliswa equkethwe kunoma yikuphi ukuxhumana okutholakele; noma
6.2.3 usithumele i-imeyili kuDPO@comwales.co.uk noma usishayele ku-ext. I-5032 isinikeza igama lakho nemininingwane yokuxhumana.
6.3 Lapho ubhalisele khona ukuthola imbalelwano yokuthengisa evela kithi sizogcina imininingwane yomuntu yeminyaka engu-3 kusukela ugcine ukuxhumana nathi.
6.4 Ngezikhathi ezithile singathengisa egameni lezinye izinkampani, ngokwesibonelo ngokungeza izibhengezo ekhasini lethu lewebhusayithi. Ukuchofoza kulezi zixhumanisi kuzokuqondisela kwisayithi lomuntu wesithathu, lapho kufanele uthintane nenqubomgomo yazo yobumfihlo. Ngeke sabelane ngemininingwane yakho neyabanye abantu ngaphandle kwemvume yakho yangaphambili.
7. UKUKWAZIWULA NOKUQOKA
Singakwazi ukuqapha futhi siqophe ukuxhumana nawe (njengokuxhumana ngocingo nama-imeyili) ngenhloso yokuqeqeshwa, ukuvimbela inkohliso nokuhambisana. Siphinde sinamakhamera we-CCTV nokuqoshwa komsindo okufakiwe ezakhiweni zethu ngenhloso yokuvikela ubugebengu kanye nezizathu zezempilo nezokuphepha. Sicela uxhumane dpo@comwales.co.uk ngemininingwane yokuthi silugcina kangaki lolu lwazi.
8. UKUQINISEKELWA OKUFANELEKILE
Ngezikhathi ezithile singathintana nezinhlangano zenkampani yangaphandle ezisebenzisa ukucubungula okuzenzakalelayo kwemininingwane yomuntu engaziwa ukwenza izincomo ngokuziphatha okuthe xaxa kwabathengi. Asenzi izinqumo ezithinta umuntu ngokusekelwe kwimisebenzi yokucubungula ezenzakalelayo.
8.2 Kwesinye isikhathi senza amasheke wesikweletu kumakhasimende:
8.2.1 ukuze sikwazi ukuthatha izinqumo ngesikweletu ngawe; futhi
8.2.2 ukuvikela ukukhwabanisa nokusebenzisa imali ngokweqile.
8.3 Ukusesha kwethu kungaqoshwa kumafayili wesikhungo sokuthenga ngesikweletu.
8.4 Uma kuqhubeka nokwenza isheke lesikweletu uthola amamaki aphansi esikweletu, sinelungelo lokungakunikezeli ngempahla noma ngezinsizakalo ezikweletini futhi / noma sidinge ukukhokhelwa kwangaphambili kwezinto noma izinsizakalo ofisa ukuzithenga. Kulokhu ilungu leqembu lethu lizokwazisa.
8.5 Uma unikeza imininingwane engamanga noma engalungile futhi sisola inkohliso, sizokuqopha lokhu. uma ufuna ukubona ifayela lakho lesikweletu, sicela uxhumane nethimba lethu leKhasimende Services elizokunikeza imininingwane yokuxhumana ne-Credit Agency esetshenzisiwe.
9. UMHLANGANO WOKUFUNDA WOKUQINISEKISA IDATHA YAKHO YABO
9.1 Sizosebenzisa imininingwane yakho kuphela lapho umthetho usivumela khona. Okuvame kakhulu, sizosebenzisa imininingwane yakho ezimeni ezilandelayo:
9.1.1 kokusebenza kwenkontileka esifaka kuwe;
9.1.2 lapho kunesidingo sokuhambisana nesibopho esingokomthetho noma somthetho esibekelwe;
9.1.3 lapho kunesidingo khona ukuvikela izintshisekelo zakho ezibalulekile; futhi
9.1.4 ngezintshisakalo zethu ezisemthethweni (njengoba kuchaziwe kule nqubomgomo) nezintshisekelo zakho namalungelo ayisisekelo awazibeki ngaphezulu kwalezi zintshisekelo.
I-9.2 ComWales ithembele ngokucacile esisekelweni sezintshisekelo ezisemthethweni lapho sicubungula idatha ngezindlela ezilandelayo. Lesi sisekelo silingana namalungelo akho nezintshisakalo zakho futhi awukhuphi ilungelo lakho lokuphikisa.
9.2.1 AmaComWales angahlinzeka ngamakheli e-imeyili ukuze kufezekiswe abalingani kanye nezithunywa ukuze kuthuthukiswe insizakalo yokulethwa kwepakethe.
9.2.2 IComWales ingahlola ukuvulwa kwama-imeyili wokuthengisa ukuze kuthuthukiswe insizakalo yokuhlinzekela ukuxhumana kwezentengiso.
9.2.3 IComWales ingaxhumana namakhasimende ngemininingwane yezimpahla ikhasimende elilungiselele ukuyithenga lapho ukuthenga kungazange kuqede ngempumelelo ukuze kuthuthukiswe insiza yokuthenga.
10. UKUQHAWULWA KOMDAKAZO WABANYE WOBUCHWEPHESHE BESITHATHU
10.1 Ngokungezelela kubantu besithathu okukhulunywe ngabo ngenhla, singadalula imininingwane yakho kubantu besithathu ngezinhloso zethu ezisemthethweni ngale ndlela elandelayo:
10.1.1 kubasebenzi ukuze kube lula ukukunikeza izimpahla noma izinsiza kuwe;
10.1.2 ezinhlanganweni zethu ezihlangene ukuxhasa ukuphathwa kwangaphakathi;
10.1.3 Abahlinzeki be-IT abahlinzeka iwebhusayithi yethu futhi bagcine imininingwane yethu;
10.1.4 abeluleki abaqeqeshiwe kufaka phakathi abeluleki, abameli, abomabhizinisi kanye nabomshwalense abasinikeza imisebenzi yokubonisana, yasebhange, yezomthetho, yomshuwalense neyokubalwa kwezimali;
10.1.5 Imali yeNgeniso ye-HM namaSiko, abalawuli kanye nezinye iziphathimandla ezidinga ukubikwa kokusebenza kwezimo ezimweni ezithile; futhi
10.1.6 abantu besithathu esingabakhethela ukumthengisa, ukudlulisa noma ukuhlanganisa izingxenye zebhizinisi noma izimpahla zethu. Ngenye indlela, singafuna ukuthola elinye ibhizinisi noma sihlangane nabo. Uma ushintsho lwenzeka kubhizinisi lethu khona-ke abanikazi abasha basebenzisa imininingwane yakho ngendlela efanayo njengoba kubekiwe kule nqubomgomo yobumfihlo.
10.2 Singadalula imininingwane yomuntu siqu emaphoyiseni, izinhlaka ezilawulayo, abeluleki bezomthetho noma abanye abantu abafanayo lapho sisebenza khona ngokomthetho ukudalula noma sabelana ngemininingwane yomuntu siqu ukuze sihambisane nanoma yisiphi isibopho esingokomthetho, noma ukuze sisebenzise noma sisebenzise iwebhusayithi yethu. imigomo nemibandela nezinye izivumelwano; noma ukuvikela amalungelo ethu, impahla, noma ukuphepha kwamakhasimende ethu, noma abanye. Lokhu kufaka phakathi ukushintshana ulwazi nezinye izinkampani nezinhlangano ngezinjongo zokuvikela inkohliso kanye nokwehliswa kwengozi yesikweletu.
10.3 Ngeke sithengise noma sisabalalise imininingwane yomuntu kwezinye izinhlangano ngaphandle kwemvume yakho.
11. IZIMALI ZOKUGUQUKA KWAMAKHASIMU EZIZIWAYO
11.1 Lapho kuvunyelwe umthetho osebenzayo, singahambisa imininingwane yakho siyise e-United States nakwamanye amazwe ngaphandle kwe-European Economic Area ('EEA') ngezinhloso ezichazwe kule nqubomgomo yobumfihlo. Sisebenzise imishwana ejwayelekile yenkontileka evunyelwe yiKhomishini yaseYurophu ngalezo zinhlangano kanye nokusebenzisa izinkampani ezibambe iqhaza kwi-EU-US Shield Yobumfihlo.
12. UKUZEZA KAKHULU
12.1 Lapho sikunikeze khona (noma lapho ukhethe khona) iphasiwedi ekuvumela ukuthi ufinyelele ezingxenyeni ezithile zeSayithi yethu, unesibopho sokugcina lemfihlo iyimfihlo. Sikucela ukuthi ungabelani ngephasiwedi nanoma ngubani.
Ngeshwa, ukuthunyelwa kwemininingwane nge-inthanethi akuphephile ngokuphelele. Noma sizokwenza konke okusemandleni ukuvikela imininingwane yakho, asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha kwemininingwane yakho edluliselwa kusayithi lethu; noma yikuphi ukudluliselwa kusengozini yakho.
12.3 Imininingwane osinikeza yona yabiwe kumaseva ethu aphephile. Sisebenzise izinyathelo ezifanele zomzimba, ezobuchwepheshe nezenhlangano eziklanyelwe ukuvikela imininingwane yakho ekulahlekelweni ngengozi nokufinyelela okungagunyaziwe, ukusetshenziswa, ukuguqulwa noma ukudalulwa. Ngaphezu kwalokho, sikhawulela ukufinyelela kwimininingwane yomuntu siqu kulabo basebenzi, abenzeli, osonkontileka nabanye abantu besithathu abanesidingo esivumelekile sebhizinisi sokufinyelela okunjalo.
13. UKUFINYELELA, UKUPHAKULA, UKUSUKA NOKUSETYENZISELWA KOKUSETSHENZISWA KWE DATA
13.1 Kubalulekile ukuthi idatha yomuntu siqu esiyibambe ngawe iqonde futhi ingeyamanje. Sicela usazise uma idatha yomuntu siqu esiyibambile ngawe ishintsha.
13.2 Umthetho wokuvikelwa kwedatha ukunika ilungelo lokuphikisa ukucubungulwa kwedatha yakho yomuntu ezimeni ezithile noma ukuhoxisa imvume yakho ekucutshungweni kwemininingwane yakho lapho lokhu kunikezwe khona. Unelungelo futhi lokuthola imininingwane ephethwe ngawe nokuthi lokhu kunikezwe ngendlela efinyelelekayo. Uma ungathanda ikhophi yeminye noma yonke imininingwane yakho, sicela uthumele i-imeyili kuDPO@comwales.co.uk. Kwezinye izimo sigcina ilungelo lokukhokhisa imali efanelekile ukuze uhambisane nesicelo sakho.
13.3 Ungasicela nokuthi senze lokhu okulandelayo:
13.3.1 buyekeza noma uguqule imininingwane yakho uma ubona ukuthi lokhu akulungile;
13.3.2 susa idatha yakho uqobo kusuka database yethu ngokuphelele;
13.3.3 sikuthumela amakhophi wedatha yakho uqobo ngendlela evame ukusetshenziswa bese sidlulisela imininingwane yakho kwelinye ibhizinisi lapho usinikezile khona lokhu, futhi sikwenza lokhu nge-imeyili ngemvume yakho noma lapho kunesidingo sokwenza isivumelwano; noma
13.3.4 khawula ukusetshenziswa kwemininingwane yakho.
13.4 Singacela imininingwane ethile kuwe ukusisiza ukuthi siqinisekise ubunikazi bakho kanye nelungelo lakho lokufinyelela, futhi ukukunikeza imininingwane yomuntu siqu ephephile ngawe noma senze izinguquko zakho esizicelile. Umthetho wokuvikelwa kwemininingwane ungavumela noma ufune ukuthi senqabe ukukunikeza ukufinyelela kweminye noma yonke imininingwane yomuntu siqu esiyibambile ngawe noma ukuhambisana nanoma yiziphi izicelo ezenziwe ngokuhambisana namalungelo akho okukhulunywe ngawo ngenhla. Uma singakwazi ukukunikeza ukufinyelela kumininingwane yakho yangasese, noma sicubungule noma yisiphi esinye isicelo esisitholayo, sizokwazisa ngezizathu zokuthi, ngokuya nganoma yimiphi imikhawulo yezomthetho noma yokulawula.
13.5 Sicela uthumele noma yiziphi izicelo eziphathelene nalokhu okungenhla kwiSiphathimandla Sokuvikelwa Kwemininingwane ku-DPO@comwales.co.uk sichaza igama lakho nesenzo ongathanda ukuba sisenze.
14. ILUNGELO LOKUVIKELA ISIVUMELWANO
Lapho unikeze imvume yakho eqoqweni, ukucubungula kanye nokudluliswa kwemininingwane yakho, unelungelo elingokomthetho lokukhipha imvume yakho ngaphansi kwezimo ezithile. Ukuhoxisa imvume yakho, uma kusebenza, sicela uxhumane nathi ku-DPO@Comwales.co.uk
15. IZINGUQUKO ZENQUBOMGOMO YAKHO YOKUVIKELA
Sigodla ilungelo lokuvuselela le nqubomgomo yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi, futhi noma iziphi izinguquko esizenzayo kunqubomgomo yethu yobumfihlo zizothunyelwa kuleli khasi. Sizokwazisa uma kukhona ushintsho kule nqubomgomo oluthinta ngokomzimba ukuthi siqoqa, sigcina noma sisebenza kanjani imininingwane yakho. Uma singathanda ukusebenzisa imininingwane yakho eqoqwe ngaphambilini ngezinhloso ezahlukile kunalezo esikwazise ngazo ngesikhathi sokuqoqa, sizokunikeza inothisi futhi, lapho kudingeka khona umthetho, funa imvume yakho, ngaphambi kokusebenzisa imininingwane yakho inhloso entsha noma engahlobene. Singakwazi ukucubungula okwakho ngaphandle kolwazi lwakho noma imvume lapho kudingeka khona umthetho noma umthethonqubo osebenzayo.
Siqoke Isikhulu Sokuvikelwa Kwedatha ukuthi sibhekele ukuhambisana nale nqubomgomo yobumfihlo. Uma unemibuzo, imibono noma izicelo maqondana nale nqubomgomo noma siyisebenzisa kanjani imininingwane yakho sicela uthinte Isikhulu Sokuvikelwa Kwedatha ku-DPO@Comwales.co.uk. Lokhu kungaphezulu kwelungelo lakho lokuxhumana neHhovisi Lekhomishini Yezokwazisa uma ungonelisekile ngempendulo yethu kunoma yiziphi izingqinamba oziphakamisayo https://ico.org.uk/global/contact-us/
Kugcine ukubuyekezwa: 17th May 2018.